‘चिसोमा हुने समस्याको निदान यसरी गरौं’ - Namasteholland, News, Information and Technology
१३ माघ २०७५, आईतवार ०९:२९011
चिसो मौसममा खासगरी वालवच्चा, सुत्नेकरी, गर्भवती, बुढाबुढी, रोगीहरुलाई समस्या हुन्छ । चिसोबाट बच्नका लागि उचित व्यवस्थापन गरिएन भने रुँघा, खोकी, ज्वरो, निमोनिया हुने खतरा रहन्छ । त्यस्तै चिसो मौसममा हात र खुट्टामा रातो छाप बस्ने, दुख्ने, सुनिने गर्छ । औँलाहरुमा अझ बढी असर पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थाामा हात-खुट्टा अत्याधिक चिलाउने समस्या पनि हुन्छ । अनि बढी कनाउँदा घाउ हुने पनि उत्तिकै सम्भावना हुन्छ ।
– विहान वा साँझको बेला अत्याधिक पानीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो समयमा तातो पानीको प्रयोग गर्न जरुरी हुन्छ ।
– वाहिर निस्कने समयमा हातमा ग्लोब्स र खुट्टामा मोजा अनिवार्य हुनुपर्छ ।
– सम्भावना भएमा चिसोको समयमा सुती या उनीको कपडा पहिरिन आवश्यक हुन्छ । काम चिसोमा सुती र चिसोमा सुतिमामथि उनीको मोजा वा ओछ्यानको प्रयोग गर्दा चिसोबाट बच्न सकिन्छ ।
– यति गर्दा पनि समस्या भएमा तुरुन्त चिकित्सकलाई बचाउनको जरुरी हुन्छ ।
२७ माघ २०७५, आईतवार २१:१०049
२९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०७:४०054
२४ माघ २०७५, बिहीबार ०९:५०056
Hey Buddy!, I found this information for you: "‘चिसोमा हुने समस्याको निदान यसरी गरौं’". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%bf/. Thank you.